Uluhlu lokuKhangela loKwakha kunye nokuThengisa isiSicelo sakho esiSelfowuni | Martech Zone
Uluhlu lokuKhangela loKwakha kunye nokuThengisa isicelo sakho esiSelfowuni
NgoMgqibelo, Agasti 1, 2020 NgoLwesithathu, Oktobha 28, 2020 Douglas Karr
Abasebenzisi besicelo esiphathwayo bahlala bebandakanyeka ngokunzulu, bafunda amanqaku amaninzi, bamamele iipodcast, bajonge iividiyo, kwaye banxibelelane nabanye abasebenzisi. Akululanga ukuphucula amava eselula asebenzayo, nangona kunjalo!
Uluhlu lweeNyathelo ezili-10 zokuLwakha kunye nokuThengisa iNkqubo eSebenzayo iinkcukacha zekhosi eyimfuneko yenyathelo- inyathelo ngenyathelo ukusuka kumxholo wosetyenziso ukuyazisa - ukunceda iiapps zifikelele kubuchule bazo obupheleleyo. Ukusebenza njengemodeli yeshishini kubaphuhlisi kunye nethemba lokuyila, i-infographic yenziwe ngamanqaku esiseko kunye neendawo zokujonga kunye neengcebiso zempumelelo ngokubanzi.
Uluhlu lokuKhangela lokuSebenza kweselfowuni lubandakanya:
Isicwangciso sokuSebenza kweselfowuni -Igama, iqonga kunye nendlela onqwenela ukuyenza ngayo ingeniso.
Uhlalutyo loKhuphiswano -Ngubani ophandle phaya, yintoni abayenzayo nabangayenziyo enokwahlula usetyenziso lwakho lweselfowuni?
Ukuseta iwebhusayithi -Uyakuyinyusa phi usetyenziso, ubeke amaqhosha abasebenzisi abaselfowuni, okanye ufake ulwazi lweemeta olubonisa usetyenziso lwakho?
Ukwakha iApp yakho -Ungayenza njani uyilo lomsebenzisi kunye nesixhobo kwaye uyidibanise ngokwasentlalweni?
Uvavanyo loMsebenzisi weSelfowuni -Khupha uguqulelo lwe-beta ngesixhobo esifana nesi UvavanyoCloud Ukuchonga iibugs, ukucela ingxelo, kunye nokujonga usetyenziso lwakho.
Ukulungiswa kweVenkile yeApple -Izikrini kunye nomxholo owunikezelayo kwivenkile yeapps unokwenza umahluko omkhulu ekubeni bayikhuphele okanye hayi abantu.
Izinto zokuThengisa - Zeziphi iividiyo, iinqwelwana ezirhuqwayo, imifanekiso kunye ne-infographics onokuyihambisa ekhuthaza usetyenziso lwakho lweselfowuni?
Imisebenzi yeendaba zeNtlalo -Ndingahle ndibize nje le ntengiso kwaye ndiyidibanise nezinto ezenziweyo, kodwa kuya kufuneka wabelane ngezakhono zosetyenziso rhoqo ekuhlaleni… apho uza kuthatha abasebenzisi abaninzi.
Inkcazo yeComputer -Ukukhutshwa kweendaba, izikrini, iprofayile yenkampani kunye noluhlu ekujoliswe kulo lweendawo ukuxelela ukuba usetyenziso lwakho lufikile!
Uhlahlo lwabiwo mali -Unebhajethi yophuhliso… yintoni uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa lwe-app yakho?
Olu luluhlu olukhulu lokutshekisha kodwa amanyathelo amabini E-CRUCIAL alahlekile:
Iingcebiso zohlelo lokusebenza -Ukucela ukuphononongwa kubasebenzisi besicelo sakho esiphathwayo ayizukukunceda kuphela kwaye uphucule uhlobo olulandelayo lwesicelo sakho, iya kuthi inyuse isicelo esikhulu phezulu kuluhlu lwesicelo esiphathwayo.
Ukusebenza kweApp -Ukubeka iliso kwindlela osebenza ngayo isicelo sakho App Annie, IsensorTower, okanye AppFigures ukubeka iliso kwinqanaba lakho, ukhuphiswano, ukwenza imali, kunye nokuphononongwa kubalulekile ekuphuculeni ukusebenza kweapp yakho.
tags: usetyenziso annieappigigureyakha usetyenziso lweselfowuniuluhlu lokuhlolaintengiso yesoftwareusetyenziso lweselulaamaqhosha osetyenziso lweselfowuniukuhambelana kwesoftwareisoftware yohlalutyo lokhuphiswanoUyilo losetyenziso lweselfowuniUhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa usetyenzisoUkwenza usetyenziso lweselfowuniiqonga losetyenziso lweselfowuniisoftware cinezela ikhithiusetyenziso lweselfowuni sdkusetyenziso lweselfowuni ukudityaniswa koluntuUsetyenziso lwefowuni yevenkileusetyenziso lweselfowuni iphepha lokugcinaIcebo lokusebenza lweselfowuniUvavanyo lomsebenzisi wesoftwareamandlauvavanyo lweflight
Incwadi yeAdTech: Isixhobo saSimahla kwi-Intanethi sokuFunda yonke into malunga neTekhnoloji yeNtengiso
Iinkcukacha-manani zokwabelana ngeNtengiso ye-PayPal kunye neMbali yokuLawulwa kweNtlawulo ye-Intanethi